Soo-saaraha Is-dhalinta Is-dhalinta Shidmadda Qalabka Mashiinka iyo Rakamka Mashiinka
Bogga ugu weyn / PWHT Mashiinka / Induction Is-dhuujinta Shrink-ga iyo Qalabka dhalista
Category: PWHT Mashiinka Tags: Qalabka wax-qabadka oo yareynaya, Iska ilaali miir daboolka, Xeelad xirxiran, Xakamaynta xirmooyinka, Habka loo xirxiray habka loo xiro, Nadiifinta mashiinka daboolka
Hoggaamiyaha Nidaamka Is-beddelka kuleyliyaha Qalinjebinta Iskudhinta Nalalka Shakhsiyadeed, Iska-dhejin-yaraynta xajmiga Rakaabka, kuwa haysta, cadaadiska alwaaxda, adkaynta kuleylka kululaynta, PWHT.
Taxanaha MYD ee nidaamka kuleylinta kuleylka ee loogu talagalay shillinta khafiifinta iyo xirmooyinka, tubbooyinka kuleylka, kuleylka kuleylka iyo kuleylka kuleylka ah
Faa'iidooyinka kuleylinta korontada
Marka loo barbardhigo hababkii hore ee diirada iyo cadaadiska ka horjoogsiga, kuleylinta induction waxay bixisaa faa'iidooyin badan, oo ay ku jiraan sifooyinka heerkulka kulaylka iyo tayada, wakhtiga wareega wareega, iyo kharashyada hooseeya. Kuleylka kuleylka ayaa sidoo kale ammaan ah, la isku halleyn karo oo sahlan oo la isticmaali karo, wuxuuna dhaliyaa ka sarreeya tiknoolajiyada kale .in hufnaanta awoodda iyo waxtarka.
Qaababka nidaamka xakamaynta DSP
• Qaboojinta hawada: Ku habboonaanta rakibidda.
• Diiwaanka heerkulka: Duubista qalooca kuleylka oo dhan oo daabac
• Qalab jilicsan oo jilicsan: Fududahay in dabayl loo qaado gabal shaqo oo kala duwan.
• Xakameeyaha heerkulka: Hayso habka kuleylka si isku mid ah shuruudaha PWHT.
• Shaashadda taabashada PLC: Dareenka wax lagu arko oo sahlan in la shaqeeyo.
• Awoodda kuleylka ee kuleylka: Xawaaraha kuleylka iyo kuleylka kuleylka, Tamarta korantada
• Si dhakhso leh u kululaynta xawaaraha. Wuxuu gaari karaa 300 darajo C 10 min. Kaydi waqtiyada kululaynta
• Keydinta Awoodda Korantada: Waxay badbaadin kartaa in ka badan 50% awoodda korontada marka la barbardhigo hababka kululeynta caadiga ah iyo yareynta cadaadiska caadiga ah
Araajida iyo meelaha la isticmaalo
Nidaamka kulaylka MYD ee qalabka kuleylka ayaa ah qalab kuleylinta qaboojinta hawo qaboojinta leh ee nidaamka DSP. Codsiyada ugu waaweyn waa dhuumaha kuleylka, kululaynta kulaylka, qalabka kuleylka dhejinta, dhirirka cadaadiska, iwm.
Daboolka kuleylka, Iska xirxiran
Qalabaynta Weldhiga, Daaweynta Isgoysyada Dabadeed Kadib, Dhibaato Dhibaato, Qaboojinta
Shirkadaha ku lug leh waa saliideedyada shidaalka, saliida iyo saliidda gaaska, aerospace, doonnida gaaska, birta, culeyska, maraakiibta cadaadiska, dhululubada, dhismaha birta, dhismaha cirifka, gawaarida tareenka, biyaha korontada, dhismaha miinajka, dhismaha baabuurta, tamarta nukliyeerka, macdanta,
Qalabka kululaynta induction ee ay ku jiraan
1. Awooda kuleylka kuleylka
2. Duubista Induction (Isku xidhka isku xidhka isku xidhka) ama (Soft induction coil)
3. Khadka isku xidhka ee ku habboon isku xidhka gariiradda iyo awoodda kululaynta
4. Xakameynta heerkulka
5. Shaashadda taabashada PLC
6. Diiwaanka heerkulka oo leh daabacad
7. Nooca kuleylka iyo isku xirka nooca K
8. Bustaha dahaadhka
9. Iyo qayb kale.
1. Nooca kululeeyaha
2. Welderka kululeeyaha
3. Bustaha daboolka
4. Iyo wixii la mid ah